Amosi 8 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
8 Izvi ndizvo zvandakaoneswa naChangamire Ishe Jehovha, uye tarira! paiva netswanda yemichero yezhizha.+ 2 Iye akabva ati: “Amosi, uri kuonei?”+ Naizvozvo ndakati: “Tswanda yemichero yezhizha.”+ Jehovha akati kwandiri: “Kuguma kwasvika kuvanhu vangu vaIsraeri.+ Handichazovaregererizve.+ 3 ‘Nziyo dzepatemberi dzichava kuungudza pazuva iroro,’+ ndizvo zvinotaura Changamire Ishe Jehovha. ‘Pachava nezvitunha zvizhinji.+ Munzvimbo dzose munhu achazvikanda kunze akanyarara!’ 4 “Inzwai izvi, imi munokachura murombo,+ kuti muparadze vanyoro vepanyika,+ 5 muchiti, ‘Zvichatora nguva yakadini kugara kwomwedzi kusati kwapfuura+ kuti titengese zviyo?+ Uyewo, zvichatora nguva yakadini sabata+ risati rapfuura kuti titengese zviyo; kuti tiite kuti efa ive duku,+ tikudze shekeri uye tiite kuti chikero chokunyengera chive chenhema;+ 6 kuti titenge vanhu vakaderera nokuda kwesirivha uye murombo nokuda kwomutengo wehwashu mbiri, uye kuti titengese marara ezviyo?’+ 7 “Jehovha akapika noUkuru hwaJakobho+ achiti, ‘Handizombokanganwi mabasa avo ose.+ 8 Nyika haizozununguswi+ nokuda kweizvi here, uye mugari wose ari mairi haazochemi+ nokuda kweizvi here? Yose zvayo ichakwirira sezvinoita mvura yorwizi rwaNire, yokandwa uye yodzikira sezvinoita mvura yaNire weIjipiti.’+ 9 “‘Zvino pazuva iroro,’ ndizvo zvinotaura Changamire Ishe Jehovha, ‘ndichaita kuti zuva rinyure achiri masikati makuru,+ uye ndichaita kuti panyika pave nerima masikati machena. 10 Ndichachinja mitambo yenyu kuti ive kuchema+ nenziyo dzenyu dzose kuti dzive rwiyo rwemariro, ndichaita kuti hudyu dzose dzive nemasaga nemisoro yose ive nemiparavara;+ uye ndichaita kuti zviite sokuchema mwanakomana+ mumwe chete, uye kuguma kwazvo sezuva rinoshungurudza.’ 11 “‘Tarirai! Mazuva achauya,’ ndizvo zvinotaura Changamire Ishe Jehovha, ‘andichatumira nzara panyika, kwete nzara yezvokudya, nenyota, kwete nyota yemvura, asi yokunzwa mashoko aJehovha.+ 12 Vachadzungaira vachibva kugungwa vachienda kugungwa, vachibva kuchamhembe vachienda kunobuda zuva. Vacharamba vachipota-pota vachitsvaka shoko raJehovha, asi havazoriwani.+ 13 Pazuva iroro mhandara dzakanaka uyewo majaya vachati rapata, nokuda kwenyota;+ 14 vaya vanopika nokuva nemhosva kweSamariya,+ uye vanoti: “Haiwa Dhani,+ namwari wako mupenyu!” uye, “Tinopika nenzira yokuBheeri-shebha!”+ Vachawa, uye havazomukizve.’”+